Mobile Legends : 2020 မှာ ဘယ်သူအများဆုံး Nerf ခံရလဲ | Codashop Blog MM
Home Games Mobile Legends Mobile Legend...
Mobile Legends : 2020 မှာ ဘယ်သူအများဆုံး Nerf ခံရလဲ
Nerf : “To nerf, to be nerfed (verb)”. Computer gaming လောကမှာ nerf တယ်ဆိုတာကတော့ game ကို power လျှော့ချတာ ဒါမှမဟုတ် element တစ်ခုခုရဲ့အစွမ်း( character, weapon, etc.) ကို balance ဖြစ်အောင်လျှော့ချတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဖက်အနေနဲ့ Buff ကတော့ အကြမ်းဖျင်း gaming characteristics ဒါမှမဟုတ် အချက်အလက်ကို ပိုကောင်းအောင်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ post မှာတော့ ဒီနှစ်ရဲ့ nerf ဆိုတဲ့ သေနတ်ကြီးနဲ့ တခြား hero တွေထက်ပိုပစ်ခံရတဲ့ hero တချို့ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့လဲ သူတို့ရဲ့ခြေထောက် (နဲ့ power ) ကို battle မှာ ခြေပြန်ချရမှာမို့လို့ပါ။
အားလျှော့ခံရတဲ့ hero များ
ဒီ heroes တွေ ( Original Server ထဲက hero 101 ကောင်ထဲက) တော့ တစ်ချိန်တုန်းကကြမ်းခဲ့သမျှကို ညီမျှအောင်လို့ ညှိလိုက်တဲ့ hero တွေပါ။ ဒီလို ချိန်ညှိမှုတွေကသူတို့ကို အနေတော်ပုံစံလေးမှာထားနိုင်မှာပါ။ ဒီ list ထဲမှာ ဘယ်သူတွေပါမလဲဆိုတာ သင် အံ့အားသင့်သွားမှာပါ။ ( hero တွေ list ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာက ဒီနှစ်ရဲ့ patch notes တွေထဲမှာ သူတို့ nerf ခံရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ပေါ်မှာ မူတည်ထားတာပါ။)
Ling. ဒီထာဝရ assassin ပိုစတာကောင်လေးကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံးရဲ့ ညှိနှိုင်းမှုတော်တော်များများရဲ့ ဓားစာခံဖြစ်နေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Defiant Sword က အံ့ဩဖွယ် damage ဖြစ်စေပြီး ထိပ်တန်းဓားကွက် ultimate Tempest of Blades ကတော့ ကံဆိုးတဲ့ enemy တွေကို အမြဲတမ်းချုပ်ကိုင်ထားပါတယ်။ Sorry bro, စိတ်လျှော့ပါဦး!
Helcurt. ဒီ shadowbringer ကြီးကိုရော လတ်တလော ranked matches တွေမှာ ဘယ်သူများတွေ့မိကြသေးလဲ? မတွေ့မိဘူးထင်တယ်နော်! Helcurt ကတော့ သူ့ရဲ့ buff တွေနဲ့ item build တာအကုန်စုံသွားရင် လျှော့တွက်လို့မရတော့တဲ့ အားကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ သူ့ရဲ့ Deadly Stinger ကြီးက OP လွန်းလို့ မကြာခဏ အားလျှော့ခံရပါတယ်။ ကိုယ်ကသူ့ team ကမဟုတ်ဘဲ enemy ဘက်ကဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ သေစေနိုင်တဲ့ stinger ကြီးနဲ့ဆို သာမန် hero လေးတစ်ကောင်ကတော့ တစ်ချက်တည်းနဲ့ ပွဲချင်းပြီးသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ Yikes!
Masha. Masha ကတော့ push ဘုရင်မပါ သူနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံး role လည်းဖြစ်ပါတယ်။ HP bar ၃ bar, physical lifesteal နဲ့ movement speed ရှိပါတယ်။ ဒေါသအိုးပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ Masha မှာ push လုပ်ဖို့နဲ့ enemy တွေရဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုယူဖို့ တော်တော်အားကောင်းတဲ့ build ရှိပါတယ်။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်းမှာ tower တစ်တိုင်ပျောက်သွားမယ်နော်! အဲဒါကြောင့် သူ့ရဲ့ Wild Power နဲ့ HP regen ဟာ သိသိသာသာ လျှော့ချခံခဲ့ရပါတယ်။ မျှတပြီလား?
X.Borg. ဒီ မီးမရှို့ရမနေနိုင်တဲ့ ကောင်လေးကလည်း တခြား hero တွေအတွက်ခေါင်းကိုက်စရာလေးပါ။ သူ့ရဲ့ Fire Missiles ကတခြားသူတွေသူ့ကိုလက်ဖျားနဲ့တောင်ထိလို့မရအောင် ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့် nerf ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ultimate ထဲကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ Last Sanity ကပိုတောင်ရူးပါသေးတယ်။ Hero တစ်ယောက်ကို သေချာမကာကွယ်ထားနိုင်ရင် တစ်ခါတည်း true damage နဲ့ ပွဲသိမ်းသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Moonton ကတော့ သူ့ကို ရေခဲရေနဲ့ ရေနှစ်ပြီး ကစားပွဲမျှတအောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီထင်ပါတယ်။
မှတ်သားစရာဖော်ပြချက်။ Brawl ရဲ့ savage Hilda ကတော့ နှစ်ရှေ့တစ်ဝက်လောက်ထိ သိသိသာသာကြမ်းခဲ့ပါတယ်။ ခုတော့ သူ့ရဲ့ skills တော်တော်များများဟာ အနည်းဆုံးတော့ တခြားသူတွေယှဉ်လို့ရအောင် အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါပြီ။
Pharsa. ဘယ်သူမှ Pharsa နဲ့ သူ့အတောင်ပံတွေကို လျှော့မတွက်သင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့စကားကိုယုံပါ။ သူ့ရဲ့ ကြောက်စရာ ultimate skill ဖြစ်တဲ့ Feathered Air Strike ဟာဆိုရင် teamfight တွေမှာ သူ့ရဲ့ အငိုက်ဖမ်းတိုက်ခိုက်တဲ့ အကြမ်းစားအဝိုင်းကြီးအောက် ရောက်သွားတဲ့သူမှန်သမျှကို wipe out လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အသံကြီးတစ်ခုနဲ့တင် ကစားသူတွေ ဝေးဝေးပြေးနေပါပြီ။ အဲဒီ magic damage ကြီးကိုလည်း လျှော့လိုက်ရပါတယ်။
မှတ်သားစရာဖော်ပြချက်။ The son of flames Valir ကလည်းတစ်ချိန်တုန်းက အကုန်လုံးကို သူ့ရဲ့Burst Fireball နဲ့ဒုက္ခပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ Searing Torrent က နောက်ကို knockback ဖြစ်စေတဲ့ effect ကလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ Cool down bro!
Bruno. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အားကစားသူငယ်ချင်းကြီးလည်း မကစားတော့ပါဘူး။ Bruno ရဲ့ အပစ်အခတ် skills တွေက ရန်သူတော်တော်များများကို ထိုးဖောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Volley Shot က enemy တွေကို Physical Damage နဲ့နှောင့်ယှက်ပေါင်းများပါပြီ။ သူ့ရဲ့ Mecha Legs က critical chance ကလည်း တခြားလူတွေအတွက် သောကတစ်ခါပါပဲ။ Moonton ကတော့ သူ့ကို အရံခုံမှာ အနားပေးလိုက်ရပါတယ်။
မှတ်သားစရာဖော်ပြချက်။ လူချောလေး Claude ကလည်း သူ့ရဲ့ rapid-fire ultimate ဖြစ်တဲ့ သူ့ pet လေးနဲ့ Blazing Duet က အားရစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် Dexter ( နဲ့ သူတို့ရဲ့ physical damage ) ကိုလည်း အပြစ်ပေးလျှော့ပေါ့ခဲ့ပါတယ်။
Tank hero တွေအတွက်တော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ သူတို့တွေက nerf တွေတော်တော်များများ ထိခံထားရပြီး သူတို့ကို tank လိုသိပ်မမာတော့အောင်ပေါ့။
Esmeralda. သူကတော့ နဂိုတည်းက အရေးပါတဲ့ hero ၁ယောက်ပဲ Esmeralda က gank လုပ်တာတို့ဘာတို့ကနေ သူ့ကိုယ်သူကာကွယ်နိုင်ပြီး ဘယ်သူနဲ့မဆိုယှဉ်ချနိုင်တယ်။ သူ့ရဲ့ Frostmoon Shield ကို သူ shield ရတာနဲ့ movement speed တွေ ကန့်သတ်ဖို့ ပြန်ညှိလိုက်ရတယ်။ သူ့ရဲ့ second skill က damage ( physical ရော magic ရော) ကိုလည်း ရန်သူတွေခံနိုင်ရည်ရှိအောင် nerf လိုက်ရပါတယ်။
Khufra. ဒီ ၂၀၂၀ မှာတော့ ကန္တာရထဲက hero တွေအကုန် nerf ခံနေရတဲ့ သဘောပါပဲ။ Khufra ရဲ့ထိရောက်မှုတွေကိုလည်း ပြန်ညှိလိုက်ပါတယ် အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ Bouncing Ball ပေါ့။ သူ့ attack နဲ့ defense elements တွေကလည်း တိုးဖို့အရမ်းခက်ပြီး ပိုဆိုးတာက စိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းတာပါ။ သူ့ရဲ့ ultimate ကလည်းလူအများကိုခေါင်းကုတ်စေလို့ ပြုပြင်ခံရပါတယ်။
မှတ်သားစရာဖော်ပြချက်။ မာပြီးတော့ တကယ့် tank တစ်ယောက်လို့ပြောရင်တော့ Uranus ပေါ့။ သူ့ရဲ့အခြေခံ physical defense ကိုလည်း သူ့ HP regen ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ ultimate နဲ့အတူ ပြန်ထိန်းလိုက်ရပါတယ်။
သင့်ရဲ့ main hero ကရော ဒီနှစ်မှာ ခဏခဏ nerf ခံရပါသလား? ဒီနှစ်မှာ သင့်ဘဝကြီးရော nerf ခံလိုက်ရတယ်လို့သင်ထင်ပါသလား? အဲဒါကိုဘယ်လို ထိန်းညှိလိုက်ပါသလဲ?
သင့်ရဲ့ နေ့စဉ် Mobile Legends top-ups အတွက်၊ Codashop ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်ပါ။ လုံခြုံတယ်၊ လွယ်ကူတယ် ပြီးတော့ passwords တွေ register လုပ်စရာတွေမလိုဘူးနော်။
Previous articleWavePay နဲ့ Codashop မှာဝယ်ပြီးပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်မယ့် အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခြင်း
Next articleICYMI: 2020 မှာ Free Fire မှာ ဘာတွေဖြစ်သွားလဲ